Nyocha nke akwụkwọ akụkọ nke omume
Ụlọ Ejiji, nke Julia Kröhn dere
Dị ka akụkụ nke nkwalite maka akwụkwọ akụkọ a, enwere obi ike na mmerụ ahụ ya dọtara otu n'ime ndị isi edemede nke ịlọ ụwa nke narị afọ nke iri na itoolu nke na-enyere ụtọ onye na-agụ melancholic ụtọ na ihe na-eme nke ọma dị ka nwanyị. Ọ nwere ike bụrụ na Anne Jacobs hụrụ ọrụ a n'anya ...
Ndị Mgbanwe Agbalị Ọzọ, nke Mauro Javier Cárdenas dere
Enwere ike iji akwụkwọ akụkọ ahụ zuru oke iji mata ọnọdụ akọwapụtara nke ọma ma ọ bụ obodo niile. Nkọwa akụkọ na ebumnuche ịbịaru nso na gburugburu, na -enye gị nkọwa nke onye bi ebe ahụ. Ọ nwere ike ịdị ka eziokwu, mana enwere nnukwu mkpa na echiche ahụ. N'ikpeazụ, …
Ọtụtụ, nke Tomás Arranz dere
A ga -echerịrị akwụkwọ na -atọ ụtọ ma na -akọ ihe mgbe niile. Ọ bụ akụkọ nke akwụkwọ akụkọ a Ọtụtụ. N’oge na -adịghị anya, m ji ụgbọ mmiri abịa ọtụtụ nkọwa nke aha akwụkwọ akụkọ (na -echebara onwe ya echiche mgbe niile mgbe m gụchara ihe na -enye afọ ojuju). N'ihi na aha ahụ nwere ihe ọ pụtara nke ga -adịghị anya ...
Ọfịs ọdọ mmiri na ubi, nke Didier Decoin dere
Otu nwanyị odyssey na narị afọ nke XNUMX Japan. Nchịkọta siri ike nke akwụkwọ akụkọ a nwere nkebi ahịrịokwu a dị mfe. Ndị ọzọ na -abịa mgbe e mesịrị…. Didier Decoin weere ederede nke akwụkwọ akụkọ a nke ọma (dịka o kwesịrị, n'ezie) Ihe karịrị afọ iri raara onwe ya nye ...
Ezinaụlọ ezughị oke, nke Pepa Roma dere
A na -ewetara anyị akwụkwọ akụkọ a ka ọ bụrụ akwụkwọ akụkọ maka ụmụ nwanyị. Mana n'eziokwu anaghị m ekwenye na akara ahụ. Ọ bụrụ na a na -atụle ya otu ahụ n'ihi na ọ na -ekwu maka nna ochie ahụ nwere ike bụrụ nke akụkọ ihe mere eme debere ihe nzuzo nke ezinụlọ ọ bụla na nke zoro nhụsianya nke ọnụ ụzọ dị n'èzí, ọ nweghị ezi uche. Enweghị otu…
E buru amụma banyere akụkọ banyere ọnwụ, nke Gabriel García Márquez dere
Nlelị, iwu edeghị ede, mmechi nke ịgbachi nkịtị, ịgụta ọnụ, na mgbu maka ọnwụ nke onye a hụrụ n'anya. Onye ọ bụla maara mana ọ nweghị onye na -akatọ ya. Nani site n'okwu ọnụ, maka ndị chọrọ ige ntị, a na -ekwu eziokwu site n'oge ruo n'oge. Onye ọ bụla maara na Santiago Nasar ga -anwụ, ewezuga Santiago n'onwe ya, onye na -amaghị mmehie na -anwụ anwụ nke o mere n'anya ndị ọzọ.
Ị nwere ike zụta akụkọ banyere ọnwụ nke buru amụma, akwụkwọ akụkọ dị mkpirikpi pụrụ iche nke Gabriel García Márquez, ebe a:
N'èzí, nke Jesús Carrasco dere
Ọ bịara n'aka m dị ka onyinye sitere na ezi enyi. Ezi ndị enyi anaghị ada ada na nkwanye akwụkwọ, ọbụlagodi na ọ bụghị n'ahịrị mbụ gị ... Nwa na -agbanahụ ihe, anyị amaghị ihe ọ bụ. N'agbanyeghị egwu ya ịgbanarị ebe ọ bụla, ọ maara na o nwere ...